Reko ny antsonareo eto Mangamila mitaraina noho ny asan-dahalo.
Indro aho manolo-tena ho anareo. Hamonjy anareo.
Hamerina ny fandriampahalemana sy hitondra herin'aratra.
Miara-miasa isika ary miara-mandresy.
Tiako ho tsapanareo aty ambanivohitra ny fitiavako anareo.
Tonga eto Betatao aho satria tsy hadinoko ianareo nametraka ny fitokisanareo tamiko.
Tsy hivadika aminareo aho fa hiasa hanatsara ny fiainanareo. Tsy maintsy tonga hatraty ny fandrosoana.
Niriako mafy ny hanatona anareo aty Antanetibe satria mirotsaka ho filohan'ny Malagasy rehetra aho.
Koa ho porofom-pitiavako anareo dia tohanako manokana ny aty ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana asa anareo ary koa ny fananganana orinasa mpamokatra zezika.
Ho mora ny zezika amin'izay fotoana izay ary hitombo ny vokatra. Mahatokisa ahy ianareo fa izaho efa mahatoky anareo sahady ny amin'ny faha -19 Desambra 2018.